UPaul Jenkins ukhipha imibala kuMarvel naseDC | Izincwadi Zamanje
UPaul Jenkins ukhipha imibala yeMarvel neDC
Awu, ngesonto eledlule unogwaja weqa njengoba besho. Akukhona ukuthi wonke umuntu wayekholelwa ukuthi abadwebi bakhathuni nababhali abasebenzela i-DC neMarvel babejabule ngokwedlulele ngendlela okwakwenzeka ngayo kuye ngokuthi yiziphi izinto ezikhathini zakamuva, kepha kubonakala sengathi izinto zibucayi kakhulu kunalabo ababengenathemba (lapho ngizifaka khona) cabanga. Ibhokisi lokuduma kwezulu lavulwa ngencwadi evulekile evela kumlobi wesikrini Paul Jenkins (Hellblazer, Inhumans, The Incredible Hulk, Spectacular Spider-man, Witchblade, Sentry and a long etc.), ngemuva kokumemezela isifiso sakhe sokuthi angabe esasebenzela i-DC neMarvel futhi, futhi akwenze kumaBoOM Studios awakhela wona Imfuno yenganekwane noHumberto Ramos ne-Deadmatch noCarlos Magno. Le ncwadi yalandelwa yingxoxo naye CBR lapho kuchazwe ngokuningiliziwe mayelana nokuthi ngokombono wakhe kuyinto engafanelekile abalobi abayitholayo kubashicileli bezinto ezimbili ezinkulu.
Ngikushiya nokunye okukhishwe okuhle kakhulu uJenkins akhiphe ngomlomo wakhe futhi okusekwe ngozakwabo abaningi:
Kuwo wonke umsebenzi wami kulo mkhakha ngibe nethuba lokusebenza nabo bonke abalingiswa abakhulu abavela kuMarvel naseDC, futhi iningi laleso sikhathi bekumnandi kakhulu. Kepha ngokweqiniso, osebenzelana nabo ufanelwe okungaphezulu kwalokho esikunikeza kona. Futhi nabalandeli, labo bantu abakhokha u- $ 4 ngekhomikhi ngayinye. Sisuse yonke imiphumela yezindaba esikutshela zona, futhi ngicabanga ukuthi amahlaya ajwayelekile asephenduke into eyodwa efana ne- "meh" *. Anginaso isifiso sokukhuthaza ukunganaki kwabafundi noma ukuzibandakanya nomkhiqizo engingakholelwa kuwo impela.
Ukuqhubeka nokufunda amagama kaPaul Jenkins kufanele uchofoze nje Qhubeka ufunda:
Ngiyazi lapho konke kwakulula kakhulu, futhi kubuyile ezinsukwini zeMarvel Knights. Ngalezo zinsuku, uMarvel wayekade eqothukile, futhi babengenayo enye indlela ngaphandle kokusinikeza abadali inkululeko nokwethemba okufanele iningi lethu. Ngibheka emuva futhi ngiyabona Abantu abangenabuntu y Umthunywa, eSpidey sami noBucky [uMark Buckingham] noHumberto [Ramos], nezinye izingoma ezifana I-Wolverine: Umsuka, futhi ngiyazi - ngoba ngangikhona - ukuthi babephumelela ngokwengxenye enkulu ngoba banginikeza inkululeko yokuyakha ngaphandle kokuphazanyiswa igunya lokuhlela.
Lokhu akunjalo isikhashana. Eminyakeni yamuva nje, ngibone bengenakuzisiza njengoba abahleli benza izinguquko ezingenamsebenzi nezilimazayo kwizikripthi nemidwebo abangazange bangenelele kuyo phambilini. Kuyangikhathaza ukuthi abadali bekuyibo obekugxilwe kubo kakhulu lapho abashicileli abakhulu bebafuna, futhi manje njengoba izinkampani ezinkulu ziphethe, izinqumo zokudala sezenziwa futhi ngabaninimasheya. Ngifuna ukudala amahlaya ngendlela okufanele yenziwe ngayo. Ngifuna abalingiswa bafe futhi bahlale befile, noma okungenani ngiqiniseke ukuthi izinqumo zokudala embukisweni ziholela kokungaphezulu okungenakugwemeka esimweni esifanayo.
Angisoze ngakukhohlwa lokho asitshela kona UBill Jemas ngesikhathi somhlangano wokuqala wokuhlela (owokuqala kaJoe [owokuqala uQuesada, empeleni): utshele abahleli ukuthi benze uchungechunge oluhle, nokuthi umsebenzi womnyango wezokumaketha kuzoba ukukhangisa nokuthengisa leyo midlalo. Utshele bonke abasebenzi ukuthi babe nesibindi futhi bakholelwe ezingeni lemisebenzi. Wakubeka kwacaca impela ukuthi ukuhweba ngochungechunge ngeke kuphazamise izinqumo zokudala. Yebo, lokho kwahamba kahle kakhulu ngalezo zikhathi ezithokozisayo, kepha eminyakeni embalwa kamuva ngabona ushintsho olusobala kakhulu. Futhi lolu shintsho, manje sengiyabona, luqondane nezingxoxo zikaMarvel neDisney. Ngokungazelelwe kwakuyimicimbi emikhulu nama-crossovers abebalulekile, futhi angikunqunyelwe lokho.
Ngibe nobudlelwano bokuhlela neMarvel obudonse iminyaka eminingi. Kwakungeyona njalo ubudlelwane obuhle, njengoba noMarvel sazi. Futhi yize besingakavumelani ngaso sonke isikhathi, lokho kuhlala phakathi kwami ​​noMarvel. Abalandeli benza kahle uma bengaba nenkinga nami ukube bengimane ngifaka izikhalazo zami zansuku zonke esidlangalaleni ngaphandle kwesizathu esizwakalayo sokwenza lokho. Kepha I-DC yindaba ehluke ngokuphelele. Kungani ngizimisele ukuchaza imininingwane ethile eyenzekile ngesikhathi ngihlangana nabo okwesikhashana ku-New 52? Ngoba ngiyamangala ngendlela abadali abaxhashazwa ngayo, futhi ngandlela thile ngishaywa umoya yizinto engizibonile ngesikhathi sami lapho. Ngithole amanga amaningi kanye nezinsongo ezimboziwe - nokuzama ukuthethelela uhlelo nokuziphatha okungasebenzi - kunalokho engake ngakubona emsebenzini wami.
UDC usehlile ethoyilethi. Kungikhumbuza ukuthi uMarvel wayenjani ngaphambili nje Ama-knight ama-Marvel. […] Okubi kakhulu, basabisa ababhali babo. Bazama ukungisabisa, ngabatshela ukuthi baye esihogweni. Izindaba ezethusayo ziningi futhi ziyahlukahluka. Nginabambalwa, futhi ngizwe abaningi kakhulu kusuka kubabhali abahlukahlukene beshaywa ukuze balandelwe, njalo besatshiswa ngokuthi bazolahlekelwa imisebenzi yabo uma bengahambisani nokugeleza. I-DC kubonakala sengathi ithuthukise isiko lapho bacabanga ukuthi "ubuchwepheshe" bufuna umbhali ngandlela thile, bese bezenza abangani emhlanganweni. Ubungcweti bumayelana nokuletha umsebenzi osezingeni ngesikhathi, noma ukuba muhle kubalandeli emihlanganweni, noma ukusebenzela ukufeza inhloso yokuhlomulisa. […] Yilokhu okungikhathazayo ngalesi simo: Akudingeki ngibe iGenius ukubona ukuthi kukhona ababhali abaningi abangajabule kakhulu e-DC muva nje. Ungacabanga ukuthi bangaki abanye laphaya esingabazi ngoba bezwa ukuthi uma bekhuluma bazovinjelwa ohlwini lwabamnyama? […] Iqiniso ukuthi iDC isiqalile ukwenza njengesiqhwaga, ukuphoqa abantu ukuthi bamukele izimo zokusebenza ezimnandi sengathi babenzela okuhle. […] Nginezinye izinto eziningi engizithandayo, njenge-cinema, imidlalo yevidiyo kanye noveli yami yokuqala.
Imininingwane engaphezulu - I-Fairy Quest: iJenkins, iRamos nokubuyiselwa kwemali kwabantu abaningi
Umthombo - Indawo Engalungile
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » Amahlaya » UPaul Jenkins ukhipha imibala yeMarvel neDC
I-Borges kanye ne-cannibalism